2 Samueri – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: 2 Samueri
Dhavhidhi anonzwa nezvoKufa kwaSauro 1 Mushure mokufa kwaSauro, Dhavhidhi akadzoka kubva kuhondo yaakakunda vaAmareki uye akagara paZikiragi kwamazuva maviri. 2 Pazuva rechitatu mumwe murume akasvika achibva kumusasa waSauro, zvipfeko zvake zvakabvaruka uye musoro wake uzere guruva. Paakasvika paiva naDhavhidhi, akazviwisira pasi achiratidza rukudzo. 3 Dhavhidhi akabvunza akati, “Wabvepiko?” Iye akapindura akati, “Ndapunyuka kumisasa yavaIsraeri.” 4 […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 1
Dhavhidhi anozodzwa kuti ave Mambo weJudha 1 Nokufamba kwenguva, Dhavhidhi akabvunza kuna Jehovha akati, “Ko, ndoenda zvangu kune rimwe ramaguta eJudha here?” Jehovha akapindura akati, “Enda hako.” Dhavhidhi akabvunza akati, “Ndoenda kupi?” Jehovha akapindura akati, “KuHebhuroni.” 2 Naizvozvo Dhavhidhi akaendako navakadzi vake vaviri, Ahinoami weJezireeri naAbhigairi, chirikadzi yaNabhari weKarimeri. 3 Dhavhidhi akatorawo varume vose vaaiva […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 2
1 Hondo pakati peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi yakatora nguva refu isati yapera. Dhavhidhi akaramba achisimba asi imba yaSauro yakaramba ichipererwa nesimba. 2 Dhavhidhi akaberekerwa vanakomana paHebhuroni: Dangwe rake raiva Amunoni mwanakomana waAbhinoami weJezireeri; 3 wechipiri, Kiriabhu mwanakomana waAbhigairi chirikadzi yaNabhari weKarimeri; wechitatu, Abhisaromu mwanakomana waMaaka mwanasikana waTarimai mambo weGeshuri; 4 wechina, Adhoniya mwanakomana waHagiti; wechishanu, […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 3
Ishi-Bhosheti anourayiwa 1 Zvino Ishi-Bhosheti mwanakomana waSauro paakanzwa kuti Abhineri akanga afa paHebhuroni, akapererwa nesimba, uye Israeri yose yakavhunduka. 2 Zvino mwanakomana waSauro akanga ana varume vaviri vakanga vari vakuru vamapoka avapambi. Mumwe ainzi Bhaana mumwe achinzi Rekabhu; vakanga vari vanakomana vaRimoni muBheeroti aibva kurudzi rwaBhenjamini (Bheeroti rakanga richiverengerwawo kuna Bhenjamini, 3 nokuti vanhu veBheeroti […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 4
Dhavhidhi anozodzwa kuti ave Mambo weIsraeri 1 Marudzi ose avaIsraeri akauya kuna Dhavhidhi paHebhuroni akati, “Tiri nyama yenyu neropa renyu. 2 Panguva yakapfuura, Sauro paakanga ari mambo wedu, ndimi maitungamirira vaIsraeri kuhondo dzavo. Zvino Jehovha akati kwamuri, ‘Uchafudza vanhu vangu Israeri, uye uchava mutongi wavo.’ ” 3 Vakuru vose veIsraeri vakati vauya kuna Dhavhidhi paHebhuroni, […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 5
Areka inouyiswa kuJerusarema 1 Dhavhidhi akaunganidza zvakare varume veIsraeri vakanga vasarudzwa, vaisvika makumi matatu ezviuru. 2 Akasimuka akaenda navanhu vose vaakanga anavo kuBhaara reJudha, kundotora areka yaMwari kubva ikoko, iyo inodanwa neZita, iro zita raJehovha Wamasimba Ose, agere pakati pamakerubhi ari pamusoro peareka. 3 Vakaisa areka yaMwari mungoro itsva uye vakauya nayo kubva kumba kwaAbhinadhabhu, […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 6
Sungano yaMwari naDhavhidhi 1 Zvino mambo akati agara mumuzinda wake uye Jehovha amupa zororo kubva kuvavengi vake vose vaiva vakamupoteredza, 2 akati kuna Natani muprofita, “Tarira ndiri pano ndigere mumuzinda wakavakwa nemisidhari, asi areka yaMwari igere mutende.” 3 Natani akapindura mambo akati, “Endai mberi muite zvose zvamunazvo mupfungwa dzenyu, nokuti Jehovha anemi.” 4 Usiku ihwohwo […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 7
Kukunda kwaDhavhidhi 1 Nokufamba kwenguva, Dhavhidhi akakunda vaFiristia uye vakava pasi pake, uye akatora Metegi Ama kubva mumaoko avaFiristia. 2 Dhavhidhi akakundawo vaMoabhu. Akavavatisa pasi akavayera netambo. Aiti akaera kaviri netambo vanhu ivavo vourayiwa, asi avo vaipinda pachiero chetatu vaitenderwa kurarama. Naizvozvo vaMoabhu vakaitwa varanda naDhavhidhi uye vakabvisiswa mutero. 3 Pamusoro paizvozvo, Dhavhidhi akarwisa Hadhadhezari […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 8
Dhavhidhi naMefibhosheti 1 Dhavhidhi akabvunza akati, “Ko, kuchine mumwe akasara here weimba yaSauro wandingaitira tsitsi nokuda kwaJonatani?” 2 Zvino kwakanga kuno muranda weimba yaSauro ainzi Zibha. Vakamudana kuti auye kuna Dhavhidhi, mambo akati kwaari, “Ndiwe Zibha here?” Iye akapindura akati, “Ndini muranda wenyu.” 3 Mambo akabvunza akati, “Hakuna mumwe akasara weimba yaSauro wandingaratidza tsitsi dzaMwari […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 9
Dhavhidhi anokunda VaAmoni 1 Nokufamba kwenguva mambo wavaAmoni akafa, mwanakomana wake Hanuni akamutevera paumambo. 2 Dhavhidhi akafunga kuti, “Ndichaitira Hanuni mwanakomana waNahashi tsitsi, sokundiitira tsitsi kwakaita baba vake.” Naizvozvo Dhavhidhi akatuma nhume kundobata Hanuni maoko pamusoro pababa vake. Vanhu vaDhavhidhi vakati vasvika kunyika yavaAmoni, 3 machinda avaAmoni akati kuna Hanuni mambo wavo, “Munofunga here imi […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 SamueriLeave a comment on 2 Samueri 10